Uummanni Oromoo Eeboo Abbaan Duulaa fi Waayiloonni Isaa Ittiin Waraanan Ofirraa Buqqisaa Jira! -
bilisummaa November 16, 2017	Leave a comment
Erga wayyaaneen uummata Oromoo weerartee waggaan 26 darbeera. OPDOn har’a fakkeessiif akka waan aantummaa uummata Oromoo qabduu qabaa gadi na dhiisaa jechaa jirtus erga Wayyaaneedhaan uummata Oromoorratti ijaarmtee waggoonni 27 darbaniiru. Dhaabni tun guyyaa gaafa ijaaramteerraa kaatee dirqama Wayyaaneerraa fudhatteen uummata Oromoo keessumaa qaroo ilmaan isaati bobbaate yakkoota lakkoofsa hin qabne raawwachaa turuu fi jiraachunis beekamaadha!. Dhaabni yakkamtuun maqaa uummata Oromootiin daldalaa turtee fi jirtu tun gaafa ijaaramturraa kaatee dirqama Oromoo gabroomsuu, saamuu kan dide ammoo ajjeesuu, hidhuu,dararuu fi biyyaa godaansisuu itti kennitee kan bobbaafte booji’amtoota waraana dargii turan kanneen akka Abbaa Duulaa fi waayiloota isaa ti.
Abbaan Duulaa waayiloota isaa kanneen akka Kumaa Dammaqsaa, Dagifee Bulaa, Suleeymaan Daddafoo, Baacaa Dabalee,Alamisheet Dagifee,Ittafaa Tolaa fi kanneen biroo waliin ta’uun waggoota 26n darban wayyaaneef ergamaa dhugaa ta’ee dalageera. Booji’amaan kun booji’amtoota waayiloota isaa dabalatee ergamtoota biroo kanneen Oromoo saamanii deegsuu,hidhanii hiisisuu, ajjeesanii ajjeechisiisu irratti isaan gargaaran dabalachuun waggoota 26n darbaniif uummata Oromoo goolaa tureera.
Lammaa Magrsaa, Abiyyi Ahimad , Warqineh Gabayyoo, Dammallaasha Gabramikaa’eel, Alamaayyoo Taganuu, Dammaituu Hambisaa, Asteer Maammoo fi kan fafakkaatan kanneen waggoota 26n darbaniif Booji’amtoota akka Abbaa Duulaa Gammadaa fi Kumaa Dammaqsaatti makamanii ummata Oromoo madeessaa turan keessaa muraasa ta’uu uummanni Oromoo quba qaba. Jarreen kun keesumaa yeroo ammaa kana yakki isaan Wayyaanee waliin ta’uun uummata Oromoorratti raawwachaa jiran yakka waggoota 26n itti turaniif ragaa guddaa fi argisiiftuu dha. Har’a yoo waraanni Wayyaaneen leenjiftee hidhachiiftee uummata Oromootti bobbaafte Aga’aazii fi Liyyuu hayiliin Sumaalee ajjeechaa sukanneessaa fi jumulaa raawwatu, yoo Oromoo kuma dhibba 6 ol qayee fi qabeenyarraa buqqisu, dhibbootaan ajjeesuu fi kumootaan madeessu karaa miidiyaa adda addaa as bahanii holola gaggeessuu malee wanti isaan miidhaa Oromoorra gahe kana dachaasuuf qabatamaan fudhatan hin jiru. ergama wayyaaneerraa fudhataniin kan aantummaa Oromoo qaban fakkeessanii haa hololan malee dhiiga Oromoo dhanagalahe, qabeenya Oromoo mancaheef itti gaafatamtuu kan taate wayyaaneedhaan yoo waa jedhan hin muldhannees, hin dhagahamnes. Kan isaan yeroo ammaa itti jiran maqaa uummata waraana wayyeen bobbaafte liyyuu hayilii sumaalee kanaan horii funaanuudha. Holola fakkeessii gaggeessuun bara bittaa fi saamichaa Oromoorratti dheereessuuf tattaaffachuudha. Isa kana ammoo kanneen dursan keessaa tokko, booji’amticha abbaa Duulaa Gammadaa fi ergamtoota dhahaata dhaaba jalee kanatti makaman kanneen akka Lammaa Magarsaa, Abiyyi Ahimad, Addisuu Araggaa fi Warqinaa Gabayyoo fe’i.
Eeyyee fakkeessitoonni maqaaf dhaaba Oromoo OPDO jedhamuu ijaarre jedhanii ittiin of waaman kunneen eenyummaan isaanii yoo saaqamee ilaalame wayyaanee ta’uun eenyufuu ifaadha. Jarreen kun waan amma uummata Oromoorratti wayyaaneedhaan raawwataa jiru kana akka waan haaraatti amma arganii fi dhagahanii of fakkeessuuf yaalanis isaawuu diraamaa siyaasaa wayyaaneen shaakalchiifteen warruma waggaa 26n darbaniif ummata Oromoo ficisisiaa turan ta’uu Oromoon tolchee beeka. Waggoota 26n darbaniif akka dhaaba Oromoo hin ajjeessinitt, akka Oromoo saamanii hin saamsisiniitti, akka waan Oromoo hidhanii hin hisiisinitti of muldhisuuf yaalanis Oromoon ragaa waliin isaan beeka.
Booji’amtoonniii fi ergamtoonni dhahaata dhaaba ergamtuu wayyaanee taate OPDOtti makaman kunneen Keessumaa Lammaa Magarsaa, Addisuu Araggaa fi Abiyyi Ahamad nama aantummaa uummata Oromoo qabu fakkaatanii hololli gaggeessaa jiran addatti ammoo Diraamaan abbaan Duulaa tibba kana itti jiru diraamaa dhama hin qabne, diraamaa fokkisaa dha. Diraamaan kun mammaaksuma “Bineensi biyya hin beekne dhaqee itillee naaf afaa jedhe” isa jedhan san fakkaata, akkasumasi. Abbaan Duulaa meeshaa Wayyaaneedhaan tolfameedha. Meeshaa kanatti kan dhimma bahaa turee fi jiru ammoo abbaadhuma tolfateedha. Kan waggoota 26n darbaniif argines kanuma. Abbaa Duulaa Qofa osoo hin ta’inis Waayiloonni isaa warri dhaaba ergamtuu OPDO jedhamtu tana keessa turanii fi dhahaata itti irkatan akkasuma warra sammuu Wayyaaneetiin dalaguu dha.
Tibba Darbe Ergamtichi Abbaa Duulaa Gammadaa jedhamu yoo karaa Tv fi Raadiyoo gadi bahee holola haar’aa wayyaaneen qindeessitee itti kennite hololu dhageenyee agarree jirra. Namni kun holola isaa kanaan “Ergan aangoo qabuun mirga Oromoo kabachiisuu hin dandeenyee aangoon irra jiru Afayaa’ummaan natti haa hafu, gadi dhiisee jira”. Jedheera. Ergamtichi kun “afyaa’ummaa koon gadi dhiisa malee OPDO dhaaboo koo gadi hin dhiisu, hojiilee dhaabni kiyya natti kenne nan hojjedha” jedheerasi. Eeyyee nama holola Abbaa duulaa kana irra isaa qofa ilaaluu fi yakka Abbaan Duulaa fi Dhaabni isaa OPDOn waggoota 26n darbaniif uummata Oromoo irratti keessumaa ilmaan isaa sabboontotarratti Wayyaanee waliin ta’ee dalage quba hin qabne “namni kun aantummaa uummataa waan qabuuf kunoo aangoo guddaa qabu gadi dhiise” jechuu mala. Dubbiin garuu akkasii miti, diraamaa Wayyaaneen qindeessite dalagaa jira. Fakkeessuuf odeesse malee haangorraa bu’uufis hin jiru.! Kan amma ammatti muldhachaa jirus kanuma!
Abbaan Duulaa diraamaa baayyee fokkisaa ta’e dalagaa jira. Diraamaa akkanaa ammoo nama waa hubatuu mitii daa’ima harma hin gu’inilleen ittiin moogsuun hin danda’amu. Duraan dursa abbaan duulaa eenyu kan jedhuuf uummata Oromoo qofaafii mitii uummattoota impaayeerittii keessa jiran maraafuu ifa waan ta’eef ibsa dabalataa hin barbaadu. Abbaan Duulaa ergamaa Wayyaaneen dhaaba OPDO jedhan bixxiltee itti kenniteedha. Namni kun ammoo aantummaa Wayyaanee malee gongumaa aantummaa Oromoos ta’e aantummaa uummata kamiituu hin qabu. Namni kun nama uummata Oromoo fixaa fi ficisisaa, saamaa fi saamsisaa tureedha. Kan biraa haa hafuutii yoo tibba kana wayyaaneen “Mana marii nageenya biyyooleessaa” /National security council/ jettee wayyaaneen murna maqaa nageenyaatiin duula uummata Oromoorratti bane ajjeechaa raawwatu hundeessitu Abbaa duulaas ta’ee qondaaloonni OPDO kanneen akka Lammaa Magarsaa fi waayiloonni isaa harka dhahanii fudhataniiru.
Namni waggoota 26f hogganaa OPDO, Pireezidaantii naannoo Oromiyaa, minsteera Ittis biyyaa, Afyaa’ii mana marii yeroo 2f ta’ee tajaajjilaa ture kun har’a ka’ee yoo ani quuqamaa uummata Oromooti, isaaf jecha kunoo aangoo tokkoo gadi dhiise jedhu kan amanu eenyu..? diraamaan akkanaas of gowwoomsuu yoo ta’e malee eenyuyyuu gama kanaan gowwoomsuun hin danda’amu.
Odoo Abbaan Duulaa jiruu Oromoon waggoota 26n darbaniif Aga’aaziin dhumaa ture, sabboontonni Oromoos tika Wayyaaneetin ija isaa duratti dararamaa fi mana hidhaatti guuramaa turan. Namni kun Yoo ilmaan Oromoo waggaa 26 guutuu ija isaa duratti maqaa ABOn dhuman eessa ture..? Har’a maaltu dhalateetiree kan namni yakkamaan Wayyaanee waliin waggaa 26 guutuu Oromoorratti yakka hojjetaa ture kun dulluma keessa ennaa soorama bahuuf jirutti hirriibarraa dammaqe..? Yoo Oromoon mirga isaa waan gaafate qofaaf shororkeessaadha jedamu inni aangorra hin turreeyyuu..? eeyyee tureera. Kanumarraa ka’uun kan amma Abbaan Duulaa itti jiru yoo danda’e diraamaa adda addaa dalagee Duula qabsoo Oromoo kallattii jijjiruti.
Mee hayyee, Tole Abbaan Duulaa har’a hirriibaa dammaqe haa jennu. Ykn wanta liyyuu hayiliin uummata Oromoorratti raawwataa jirutu aarsee dammaqse haa jennu. Mee aantummaa uummata Oromoo waan qabuufis jennee humnumaan haa amannu. Kana amannee kaanee namni kun dhuguma yoo qulqullummaan wantoota tarreeffaman kanaaf jedhee Af-yaa’ummaa mana marii uummataa ykn paarlaamaa gadi dhiise, yoo dhuguma Oromoof nahe, Yoo onnee qabaate maaf miseensoota OPDO hunda amansiisee mootummaa feederaalaa kan wayyaaneen gaggeeffamu, kan ummata Oromootti waraana bobbaasee ficisiisaa jiru san keessaa gutumatti dhaaba isaa fudhatee hin bane. Kana hin dandeenye yoo jedhame ammoo maaf aangoo qabuu hundumaa gadi dhiisee, OPDOyos gadi lakkisee hin bane ykn maaf yakkaa fi shira Oromoorratti waggoota 26n darbaniif Wayyaanees ta’e OPDOn uummata Oromoorratti raawwachaa turan adabaabaayitti baasee himee ykn saaxilee Oromoo dhiifama hin gaafanne….? Inni garuu kana godhuu hin feene, kaayyoo isaas miti. Inumaawuu yoo dubbatu kan dhageenye “dhaaba koo OPDOn akka cimuun hojjedha” yoo jedhuudha. Kun maal jechuudha jennee yoo salphumatti ilaalle OPDO uummata Oromoorratti cimsuun Wayyaanee cimsuudha, maaliif jennaan Wayyaaneen OPDO kan ijaarteef dantaa Oromoof osoo hin taane dhimmi ishiitiifi. OPDO qabattees waggoota 26n darbaniif Oromoo saamaa, ajjeesaa, hidhaa fi biyyaa godaansisaa turteetti. Kanumarraa ka’uun namani kun Diraamaa haaraa wayyaaneen qindeessiteef, kan bor-iftaan adeemsa keessa agarru hojechaa jira malee dhuguma miidhaan Uummata Oromoo itti dhagahameetii miti. Aangoon inni gadi dhiise hin jiru. Namni kun duraanis lakkoofsaaf maqaa Oromootiin achii taa’ee haa daladalu malee aangoo mirga Oromoof dhaabbatu harkaa hin qabu. Kanarraa ka’uun Abbaan Duulaa achirraa ka’ees dhiisees qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti waan dabalus waan hirrisus hin qabu.
Oromoon osoo Abbaan duulaa Fi waayiloonni isaa maqaaf aangoo gurguddaa qabatanii addawaawii ykn IHDG keessa taa’anuu, keessumaa Osoo Abbaan Duulaa waraana Wayyaaneetti karaa argisiisee hidhaa jjeechaa, saamicha raawwachaa jiruu qabsoo isaa FXG finiinsee sadarkaa har’a irra jiru kanarraan gahe. Oromoon fuunduraafis Abbaa Duulaas ta’e fakkaattoota akka isaa ergamtoota OPDO ofiin jedhan kanneen akka Lammaa Magarsaa, Abiyyi Ahimadii fi kannene biroorraa daboon bilisummaa isaaf eeggatu hin jiru. Hololli isaan gaggeessaa jiranis qabsoo Oromoo gongumaa gufachiisuu, ykn duubatti deebisuu hin danda’u. Har’a Oromoon alaa manaa bilisummaa isaaf ka’eera. Eeboo Abbaan Duulaa fi waayiloonni isaa wayyaanee waliin ta’anii Ittiin waraanan Ofirraa buqqisaa jira. Kun jabaatee itti fufuu qaba. Eeyyee Oromoon holola diinaaf osoo gurra hin kenniin qabsoo isaa, qabsoo bilisummaa cimsee itti fufuu qaba. kan faayidaa qabuu fi galmaan nama gahus isa kana malee holola fakkeessii diinni dhiphuurraa ka’ee hololuu miti.
Previous ‘We fear for our lives’: how rumours over sugar saw Ethiopian troops kill 10 people
Next The Oromo liberation struggle marches forward; never backward